Dil Garsoor: Askari waa Dhintay qof Shacab ahna waa Dhaawac – Radio Daljir
Dil Garsoor: Askari waa Dhintay qof Shacab ahna waa Dhaawac
Juunyo 30, 2017 8:10 g 0
Waxaa caawa Hotel Kulmiye, xaafadda Garsoor, lagu dilay askari ka tirsan Ciidanka Booliska Gaalkacyo, waxaana lagu dhaawacay qof shacab ah oo askariga la fadhiyey.
Sida ay Radio Daljir u xaqiiyeen ilo wareedyo ka agdhawaa falka, weerarka waxaa geystay 2 nin oo ka yimid dhanka xaafadda Baraxley, kuna hubaysan bastoolado, isla markii ay falka fuliyeena u cararay isla xaafadda Wadajir.
Lama sheegin cid ka dabatagtay ama wax dhaawac ah oo soo gaaray labada nin ee dilka gaystay.
Weerarka caawa ayaa lala xiriirinayaa toogashada 2 kamid ahaa 7 nin oo maanta Bossaso lagu toogtay. Labadaas nin ayaa magaalada Gaalkacyo ku dilay 24 qof (afar iyo labaatan) oo isugu jira masuuliyiin iyo shacab (dhegayso warka hoose), meesha ay hal qof ku dhaawaceen.
Askariga caawa la dilay ayaa horay u dhaawacay mid kamid ah labada dil-fuliye ee ka hawlgeli jiray Gaalkacyo, kaddib dil uu u gaystay ganacsade isla xaafadda Garsoor, isla falkaasna ku dhaawacay ganacsadaha walaalkiis.
Qofka shacabka ah ee caawa dhaawacmay weli war sugan kama uu soo bixin.
Garsooraha iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda Bossaso ayaa maanta ugu baaqay “dhallinta wax dhisha ee ka soo talaabta xaafadda Wadajir in ay shareecada Islaanka qaataan oo dilalka ka waantoobaan.”
Dr. Saadiq Eenow – Qaybta 2aad: Waxtar Yeelo oo Dalkaaga Baro (dhegayso & sawirro)